March 2012 | IT Sharing Network
License keys of Kaspersky Antivirus and Internet Security (2011 and 2012) - 31st march 2012
License keys of Kaspersky Antivirus and Internet Security (2011 and 2012)
ISA Server နဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ Bandwidth Controller
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ isa server ပေါ်မှာ run လို့ရတဲ့ bandwidth controller ဆော့ဝဲလ်ပါ။
Software ရဲ့ နာမည်က Traffic Quota ပါ။
WisdomSoft AutoScreenRecorder Pro 3.1.375
ဒီကောင်လေးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ screen ကို auto record မှတ်ပေးမယ့် ဆော့(စ်)၀ဲလေးပါ။ ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်က ပြုလုပ်သမျှ အရာရာတိုင်းကို video file (သို့) flash file အနေနဲ့ save မှတ်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး တိတိကျကျ သိရအောင် အောက်မှာ ဒီကောင်လေး လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေကို အကျဉ်းရုံးပြီးဖော်ပြထားတာတွေ မူရင်းအတိုင်း ကူးယူဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Advanced Password Recovery v1.3 - The Password Recovery Solution (1.61MB)
Features:Manage the Windows Accounts
Enable Keyboard Shortcut Ctrl+V to Paste in Windows Command Prompt
ဒီတစ်ခါ ကျနော်တို့ရဲ့ နည်းပညာအစ်ကိုကြီး ကိုကိုဝင်းကို အားကျလို့၊ နည်းပညာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပို့လေး တင်မယ် စိတ်ကူးပါတယ်။ မသိရင် မဖြစ်တဲ့ ဟာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ကိုယ်သိတဲ့ဟာလေး မျှဝေတဲ့ သဘောပါပဲဗျာ။ ကျနော်တို့ သုံးနေကျ Ctrl+C, Ctrl+V လို copy, paste လုပ်တဲ့ shortcut မျိုးကို windows command prompt မှာ သုံးလို့ မရပါဘူး။ ဥပမာ text တစ်ခုခုကို copy ကူးပြီး cmd ထဲမျာ paste သွားလုပ်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒါလေး သုံးလို့ရအောင်ပြင်နည်းလေးပါ။
Kaspersky Trial Reset 2012 4.0.0.1 Rus/Eng by Elerium (4.02MB)
kaspersky Trial Reset အသုံးလိုမယ့် သူငယ်ချင်းများ ရှိကောင်းရှိနိုင်တာမို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ... ကျွန်တော့် ဘလော့မှာ kaspar နဲ့ပတ်သက်လို့ kay တွေလဲအသစ်ရတိုင်းတင်ပေးထားလို့ သုံးရတာအဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ် ... ဒီကောင်လေးကိုလည်း ဆောင်ထားချင်ရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ်...
၀င်းဒိုး Loader 2.1.2 Activator/Crack ၀င်းဒိုး7(1.42MB)
အရင်ကလည်း တင်ပေးနေကြပါ အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... အသုံးပြုနိုင်တဲ့ operating systems တွေကိုလည်းအောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ...အသုံးလိုတတ်တာလေးမို့ ဆောင်ထားချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ် ...
Cevil တက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်.......
ဒီကောင်လေးက အိမ်ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့ ဆော့(စ်)၀ဲလေးပါ။ ပုသိမ်မှာ GTC တက်နေတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်က Gtalk ကနေ တောင်ဆိုထားလို့ပါ။ ညီလေးရေ.....အကိုတို့ ပြည်မှာ မီးကလဲ မမှန်၊ ကွန်ကလည်းမကောင်းဆိုတော့ ကြားထဲမှာ သုံးရက်လောက်ကြာသွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်။ အသုံးလိုမယ့် သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။ ဧပြီ(၁)ရက်နေ့ ရောက်ရင် pyayblogger.co.cc ကို ပြောင်းပြီး အသုံးပြုမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလဲ အသိပေးအပ်ပါတယ်။
All Premium Accounts Update 30 March 2012
Filesonic Premium Account 30 Mar 2012, Firstload Premium Account 30 Mar 2012, Megashare Premium Account 30 Mar 2012, Wupload Premium Account 30 Mar 2012, Uploading Premium Account 30 Mar 2012, Filemashine Premium Account 30 Mar 2012, Usenext Premium Account 30 Mar 2012, Filesmonster Premium Account 30 Mar 2012, Uploadic Premium Account 30 Mar 2012, Share-Online Premium Account 30 Mar 2012, Netflix Premium Account 30 Mar 2012, Unibytes Premium Account 30 Mar 2012, Fastdebrid Premium Cookies 30 Mar 2012 , Fileape Premium Account 30 Mar 2012, Rapidshare Premium Account 30 Mar 2012, Uploaded Premium Cookies 30 Mar 2012, Turbobit Premium Account 30 Mar 2012, Rapidshare Premium Cookies 30 Mar 2012, hotfile premium account 30 Mar 2012, mediafire premium account 30 mar 2012.
ဒီကောင်လေးက ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Registry error တွေ၊ *.tmp file တွေ၊ *.chk file တွေကြောင့် စက်က လေးကန်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ system ကို ပြင်ဖို့ သုံးတဲ့ဟာလေးပါ။ ပြီးတော့ System Checkupလုပ်တာတွေ၊ system cleanup၊ system speedup လုပ်တာတွေအပြင်၊ အခြား powerful tools အမျိုးပေါင်း လေးဆယ်ကျော်လဲ ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ဇာတ်ကားတွေမှာ စားတန်းထိုးလို့ရတဲ့ Subtitle Edit 3.2.6 Final + Portable
ဒါလေးကတော့ VCDသီချင်းတွေ၊ နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတွေ၊ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ တွေ့နေကြ၊ ဘာသာပြန်စာတန်းထိုး ဆော့(စ်)၀ဲလေး ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ့် သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းကြပါ ခင်ဗျား။ ဒီကောင်လေးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း အောက်မှာ လေ့လာလို့ ရအောင် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရဲ့ Blog ကို Domain Name ပြောင်းတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီ (၁)ရက်နေ့က စပြီး www.pyayblogger.co.cc .......ဒိုမိန်း အသစ်ကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း သူငယ်ချင်းအားလုံး အသိပေးအပ်ပါတယ်။
Window7ကို window update ပိတ်နည်း
၁.အရင်ဆုံး control panel ထဲဝင်လိုက်ပါ။
၂.ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ ရှိတဲ့ category ကို နှိပ်ပြီး large ions ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Reset Winsock အင်တာနက် error
၁.start>run>cmd ကို enter နှိပ်လိုက်ပါ။
၂.ping google.com ကို ရိုက်လိုက်ပါ။
iPhone တစ်လုံးကို UnLock / Upgrade ပြုလုပ်နည်း-pdf
အောက်က လင့်လေးမှ pdf ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူပါခင်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
Trial Version ကနေ Full Version လုပ်ကြမယ်
Trial ကာလ ၁လတို့ 15ရက်တို့ 10 ရက်တို့ပေးတဲ့ဆော့ဝဲလ်မျိုးတွေကို expire မဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။
1 Gb Memory Stick မှ2Gb ရရှိအောင်တိုးပေးမဲ့ Software
ဒီ software လေးကတော့ 1GB ပမာဏရှိတဲ့ mp3,mp4,sd နဲ့ stick တွေကို 2GB အထိတိုးမြင့်ပေးမဲ့ဆာ့ဝဲလ်လေးပါ။
Wise Disk Cleaner 7.12 Build 465 Final | 2.31 MB
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ wis disk cleaner တင်ပေးလိုက်တယ် ... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ...
Wise Disk Cleaner – Program for quick and easy release of free hard disk space. The utility removes junk files that are not used by the programs installed on your system. Program can detect over 50 types of junk files, and you can add any file types that you think debris. After the program will scan your system for junk files, you can individually view each file, and detailed information about it, and then decide whether to delete it.
Flash Player Pro v5.1 | 8.07 MB
Flash Player Pro isavery handy flash tool kit designed to beaMacromedia flash player and manager. Flash Player Pro it has several powerful flash tools: preview and browse flash movie, capture flash image and set it as wallpaper, create flash screensaver with ease, make conversion between SWF and EXE flash movies etc
All of these features will help you enhance and extend the using possibility of existing flash files. And with friendly user interface, Flash Player Pro offers youafantastic animated flash world!
CPU Speed Pro 3.0.4.5 | 1.59-2 MB
CPU Speed Professional isastandalone application that measures the REAL speed of your Intel or AMD central processor unit (CPU). It featuresastunning interface with elegant animations and screen transitions. Click the ‘Test My Speed’ button and watch as CPU Speed ramps up your computer’s processor to full throttle.
The MHz needle swings aroundahandsome ‘speedo’ style dial to display your cpu speed. Click the ‘Show CPU Details’ button to see more detailed information about your system, including cpu manufacturer, published speed, memory configuration and more. After you have tested your CPU speed, you can choose to submit the result to the CPU speed online ranking site so that you can compare your speed with other ones from around the world.
Zebra Screen Recorder 1.3 | 8.83 MB
ဒီကောင်လေးက Screen ကို video ဖိုင်အနေနဲ့ recode လုပ်လို့ရတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် ... ကိုယ်ကွန်ပြူတာမော်နီတာမှာ လုပ်သမျှကို record လုပ်ထားလို့ရပါတယ် .... အသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ် ...
Talking Tom Cat2Apk Android (2.06MB)
ဒီိဂိမ်းလေးက လူတိုင်းသိပြီးသား ဂိမ်းလေးပါ အားလုံးကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ... အသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ် ...
Blog address လေးကို www.pyayblogger.co.cc သို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်
ကျွန်တော်တို့ blog မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ blog address လေးကို sky net အသုံးပြုသော မိတ်ဆွေများ ကျော်ခွကြည့်နေရသည့်အတွက် 1.4.2012 တွင် www.pyayblogger.co.cc သို့ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
proxy switcher pro 5.5.0 (4.7MB)
Proxy ချိန်းသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ proxy switcher pro 5.5.0 လေးကို သုံးပြီး proxy ချိန်းလို့ရပါတယ် ... စမ်းသုံကြည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ...
Proxy Switcher - an instantaneous change proxy server settings "on the fly." The program will automatically loadahuge list of proxy servers, checks them for availability and anonymity. You can surf the Internet anonymously, using asaproxy server, and once more. Switching between the available proxies will occur automatically after you set time intervals. Using Proxy Switcher, you can visit any web resources without fear of theft of your data. You can be assured that your data will not get into spam lists, that your IP address, operating system and Internet browser will be determined.
ကိုယ်တိုင်လေ့လာ Java သင်ခန်းစာ (5.79MB)
Java Programming ရေးသားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အခြေခံအကျဆုံး လမ်းညွှန်စာအုပ်
Graphics using Appets
လေ့လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်ထား နိုင်ပါတယ် ...
ဘက်စုံသုံး cheatengin6.2 (New Version)
မကြားသေးခင်က cheatengin6.1ကို တင်ပေးဖူးပါတယ်။ ခု အသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆော့(၀ဲ)လေး အသုံးပြုပုံကို တော့ youtube မှာ ရှာဖွေပြီး လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ ကောင်လေးပါ။ ဒီဆော့(စ်)၀ဲလေးကို ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်...............................................................။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်လေးမှာ ဒေါင်ကြပါခင်ဗျ။
ခု ရက်ပိုင်းအတွင်း အသစ်ထွက်လာတဲ့ ဆော့(စ်)၀ဲလေးပါ။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ Desktop ကို အလှစင်ဖို့ ၀ါသနာကြီးသူတွေအတွက်ပါ။ အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်လေးမှာ ဒေါင်းကြပါခင်ဗျ။ ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတာရယ်၊ မီးအရမ်းပြတ်နေတာရယ်ကြောင့် အသေးစိတ်မရေးနိုင်တော့လို့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ESET NOD32 5.0.95.0 + Password Update 29 MARCH 2012
ESET NOD32 5.0.95.0 32 bit နဲ့ 64 bit နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် software နဲ့ user password နှစ်မျိုးစလုံးတင်ပေးထားပါတယ် ... software ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်လဲ user password တစ်ခုထဲဒါင်းလို့ရအောင် လင့်ခွဲတင်ပေးထားပါတယ် ... အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ...
AVG Internet Security/Anti-Virus Pro 2012.2126 Build 4890 Finalx86/x64 Full + Serial Key
AVG Internet Security x86 / AVG Internet Security x64 / AVG Anti-Virus Pro x86 / AVG Anti-Virus Pro x64 စိတ်ကြိုက်ရွေးသုံးလို့ရအောင် AVG အကုန်စုတင်ပေးလိုက်တယ် .... software ရှိပြီးသားသူငယ်ချင်းများ key ဖိုင်လေးတင် ဒေါင်းလို့ရအောင် လင့်ခွဲတင်ပေးထားပါတယ် ... အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ် ...
All Premium Accounts Update 28 March 2012
Filesonic Premium Account 28 Mar 2012, Firstload Premium Account 28 Mar 2012, Megashare Premium Account 28 Mar 2012, Wupload Premium Account 28 Mar 2012, Uploading Premium Account 28 Mar 2012, Filemashine Premium Account 28 Mar 2012, Usenext Premium Account 28 Mar 2012, Filesmonster Premium Account 28 Mar 2012, Uploadic Premium Account 28 Mar 2012, Share-Online Premium Account 28 Mar 2012, Netflix Premium Account 28 Mar 2012, Unibytes Premium Account 28 Mar 2012, Fastdebrid Premium Cookies 28 Mar 2012 , Fileape Premium Account 28 Mar 2012, Rapidshare Premium Account 28 Mar 2012, Uploaded Premium Cookies 28 Mar 2012, Turbobit Premium Account 28 Mar 2012, Rapidshare Premium Cookies 28 Mar 2012, , hotfile premium account 28 Mar 2012, mediafire premium account 28 mar 2012.
Facebook မှာ subscribe ကို Disable လုပ်မယ်
Disable Facebook Subscribe Button To Keep Your FB Account Private
Window Password Remover
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာ ပက်ဝက်မေ့သွားတဲ့အခါအသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီဖိုင်လေးကို iso အနေနဲ့ cd ခွေထဲ burn ထဲပြီး လိုအပ်တဲ့အချိန်ထုတ်သုံးလို့ရပါတယ်
License keys of Kaspersky Antivirus and Internet Security (2011 and 2012) - 28nd march 2012
28nd march 2012
SlimWare Utilities FixCleaner v2.0.4398.833 | 4.25 MB
ကွန်ပြူတာသွက်လက်မြန်ဆန်စေဖို့အတွက် တကယ်လန်းတဲ့ Fix Cleaner လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... ဒီကောင်လေးinstall လုပ်ပြီးရင် Register လုပ်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပါတယ် ... Keygen ဖွင့်လိုက်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ email ထည့်ပြီး GEN ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် ... ရလာတဲ့ serial key နှင့် email ကို ထည့်ပြီး register လုပ်ပေးရပါမယ် ... ဒီကောင်လေးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုတော့ အောက်မှာဆက်လက်ဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ် ...
CCleaner 3.17.1888 ML + Portable | 6.19 MB
ဒီကောင်လေးကတော့ လူတိုင်းရင်းနှီးပြီးသားလေးပါ ... အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... portable လေးပါတင်ပေးလိုက်ထားပါတယ် ... အသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလော့ဆွဲနိုင်ပါတယ် ...
မိမိကိုပို့သော Gmail ထဲမှာ IP Address ရှာကြမယ်
မိမိ gmail ထဲမှ မိမိသိချင်သော mail အားဖွင့်လိုက်ပါ။
header ရဲ့ ညာဘက်မှာ အောက်ဆိုက်သောမျှားလေးထဲမှ Show Original ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Download O&O DiskRecovery 7.1.183 Full Version
ဒီ ဆော့(စ်)၀ဲလေးကတော့ Disk Recovery လုပ်တဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကို အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ O&O DiskRecovery ဆော့(စ်)၀ဲလေးက အဟောင်းတော့ အဟောင်းလေးပါဗျာ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က ထွက်ရှိလာတာပါ။ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုရတာ အဆင်လဲပြေ၊ ထိလဲထိရောက်မှုရှိလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Premium Account - 26th march 2012
Premium Account အသုံးလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ copy လုပ်နိုင်ပါသည် ....နောက်လူများလဲ အသုံးပြုနိုင်အောင် password ကိုတော့လုံးဝမပြောင်းခဲ့ပါနှင့် ... အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ...
Avast Internet Security v7.0.1426 with License Valid Till 13-06-2013
Avast Internet Security v7.0.1426 ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ လိုင်စင် 13-06-2013 အထိရပါမယ် ... အောက်ကလင့်မှာ software အတွက် ဒေါင်းလော့လင့်နဲ့ key အတွက်ဒေါင်းလော့လင့်ကို ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ... software ရှိပြီးသားသူငယ်ချင်းများ key ဖိုင်လေးတင်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ...
NewSoftware's USB Block v1.5.0 (3.91MB)
ဒီကောင်လေးကိုတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ...မိမိကွန်ပြူတာ usb post ကနေတဆင့် မိမိအချက်အလက်တွေကို တခြားသူယူလို့မရအောင် ပိတ်ထားလို့ရပါတယ် ...
This software is made ​​withaview to keeping the existing files onacomputer oranotebook from unauthorized copying. NewSoftware's USB Block v1.5.0 Incl Crack Full Version will block access to all the devices that go into our computer without permission. Examples such as USB drives, external hard disk, memory card, iPod, digital camera CD or DVD and the Internet. so when we have our PCs in use by someone else, we do not need to fear or anxiety with which his name copy and paste files without permission.
Adobe Premiere Pro CS5 x64 Full Version | 1.23 Gb
Free Kaspersky Offline Virus Defination Updates
kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ http://www.kasperskysupport.com/ ဆိုက်မှာ update ဖိုင်များကို ဒေါင်းလော့ဆွဲလို့ရပါတယ် ...
License keys of Kaspersky Antivirus and Internet Security (2011 and 2012) - 25th march 2012
BitDefender Antivirus & Internet Security 2012 + Activated 12500 Days
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Antivirus software တစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ Bitdefener 2012 ပါခင်ဗျ။ ကျနော့်ဆရာ ဦးဂိုဂယ်(Google) ကြီးဆီမှာ ရှာဖွေပြီး ဖတ်ကြည့်တော့ ဒီလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်လဲ ဦးဂိုဂယ်ကြီးအားကိုးနဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလို့ ညွှန်းတာပါဗျာ။ ကိုပြည့်ဖြိုးကလဲ Kaspersky ကို သူကိုယ်စလှယ်ယူထားသလို ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင် တင်နေတော့ ကျနော်လဲ အားကျမခံပေါ့ခင်ဗျာ။ Bitdefender Antivirus 2012 ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာကို
viruses, spyware & spam တွေ အန္တရာယ်က အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Limbo Game Full Chapter
Limbo portable+ full chapter Game လေးဟာဆိုရင် မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ install မလုပ်ရပဲနဲ့ Open ဖွင့်ပြီး တမ်းဆော့လို့ ရမယ့် ဂိမ်းကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ ဒီဂိမ်းလေးကတော့ ကလေးသူရဲကောင်းလေးရဲ့ တောတွင်းစွန့်စားခန်း အက်ရှင်ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး ဂိမ်းလေးမပြီးဆုံးမချင်း မထချင်လောက်အောင် စိတ်ကို ဖမ်းစားထားမယ့် ဂိမ်းမျိုးလေးပါပဲ။ အဆုံးထိအောင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ မထတမ်း (၅)နာရီ၊ (၆)နာရီလောက် ဆော့ရပါလိမ့်မယ်။ ကဲ.....စိတ်ကို အပြောင်းအလဲလေး လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Limbo Game လေး ဆော့ရင်း နယ်မြေသစ်ကို စွန့်စားကြည့်ရအောင်။အောက်လင့်လေးမှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။
Memory Stick မှ Virus (Computer) သို့မ၀င်အောင်
StartထဲကRunထဲမှာ secpol.msc လို့ရိုက်ပြီး Enter နိပ်ပါ။
Local security Settings ပေါ်ရင်
Software Restriction ကို Right Click နိပ်ပြီး Create New Policies ကိုနိပ်ပါ။
ဘက်စုံသုံး CheatEngin6.1 full version
ပထမဆုံး ပြောပါရစေ၊၊ ဒီ tool လေး၊ ဘယ်လောက် အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အားလုံးမသိပါဘူး ခင်ဗျာ။ ပြီးတော့ ဒီ tool လေးက open sources software လေးပါ။ နေရာများစွာမှာ အသုံးချနိုင်မယ့် tool ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Youtube ကို ၀င်ရှာရင်းနဲ့ ရင်းနှီးလာတဲ့ tool လေးပါ။
ALL Player 5.1 | 28.77 Mb
တကယ်လန်းတဲ့ player လေးဖြစ်ပါတယ် audio အတွက်ရော vedio အတွက်ပါသုံးလို့ရတဲ့အပြင် install လုပ်တဲ့အခါ All Converter Pro လေးပါ တစ်ခါတည်းတွဲပါလာပါတယ်.. ဒီဇိုင်းလေးလည်း လန်းသလို သုံးရတာလဲ အဆင်ပြေကောင်းမွန်ပါတယ် ... player တွေအများကြီးမတင်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ တစ်ခုထဲနဲ့ အစုံသုံးလို့ရတဲ့ All Player လေးကို စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်ပါတယ် ....
Hardisk repair softwares
Hard Disk bad sector Pro
Hard Disk Repair full ပါ
HDD ကိုသန့်ရေးလုပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ် Moo0 Diskcleaner 1.16
ဆော့ဝဲလ်ကို Portable ရော exe ရော နှစ်မျိုးစလုံးတင်ပေးထားပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ Ccleaner နဲ့တူပါတယ်။
License keys of Kaspersky Antivirus and Internet S...
Advanced Password Recovery v1.3 - The Password Rec...
Enable Keyboard Shortcut Ctrl+V to Paste in Window...
Kaspersky Trial Reset 2012 4.0.0.1 Rus/Eng by Eler...
၀င်းဒိုး Loader 2.1.2 Activator/Crack ၀င်းဒိုး7(...
ဇာတ်ကားတွေမှာ စားတန်းထိုးလို့ရတဲ့ Subtitle Edit 3....
1 Gb Memory Stick မှ2Gb ရရှိအောင်တိုးပေးမဲ့ Soft...
Blog address လေးကို www.pyayblogger.co.cc သို့ပြော...
AVG Internet Security/Anti-Virus Pro 2012.2126 Bui...
Avast Internet Security v7.0.1426 with License Val...
BitDefender Antivirus & Internet Security 2012 + A...
wireless network watcher v1.31
C မှာနေရာမလောက်လို့ အခြားသော Partition မှာ Program...
License Keys of ESET NOD 32 Antivirus valid upto 6...
Kaspersky Seguridad v1.1 | 22.19 MB
Internet မှာလိုချင်တဲ့ Serial Key ကိုရှာဖွေနည်းလေးပါ
အာကသပေါ်မှာ ကစားမယ့် Angry Birds Space For Pc (32.7...
ကျွန်တော် blog မှ download ဆွဲနည်းလေး
CyberLink PowerDVD Ultra 12.0.8680.1312 Retail Mul...
patch key crack ထည့်ပေးဖို့မလိုတဲ့ Internet Downlo...
Window Installation3in 1 (Myanmar Language)
Autorun Virus Remover 2.3 with Patch
Premium Account 23 Mar 2012
မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုက်တွေ ကို block လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်...
USB Flash Security## 4.1.5+Crack
ISA Server 2006 အသုံးပြုနည်း (2.27MB)
Easy GIF Animator Pro 5.2 full with Serial Key (3....
Photo ပြင်တဲ့ Software အလန်းလေးဗျို့
Network Bandwidth Monitor 1.2.3.0 +Crack
Premium Account 22th march 2012
StoneScreenRecorder + crack
License Keys of ESET NOD 32 Antivirus valid upto t...
URSoft Startup Faster v3.6 | 285.15 KB
ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ကောင်းမွန်စေဖို့ Advanced SystemCa...
Windows Loader v2.1.2 By DAZ | 1.42 Mb
ADOBE ILLUSTRATOR အဓိကသော့ချက်များ (မင်းသန့်အောင်)...
Basic Android - application ရေးသားဖန်တီးခြင်းဆိုင်...
အခြေခံဒီဇိုင်းနှင့် ဂရပ်ဖစ် အနုပညာ (ဆန်နီညိမ်း) 15...
ImTOO Photo to Flash v1.0.1.20120227 | 28.13 MB
Total Uninstall Pro 5.10.3.1420 | 6.19 MB
Advanced RAR Repair 1.2 preactivated (747.26kb)
နောက်ဆုံးထွက် Deep Freeze V.7.30.060.3852
ကော်ပီကူးတဲ့နေရာမှာ အလွန်ကို မြန်ဆန်တဲ့ TeraCopy2.2
Wifi Hacking ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် WEP/WPA/WPA2...
Premium Account 20th march 2012
Proxy ရှာပေးတဲ့ Proxy Switcher Pro 5.5 လေးပါ
Android Device တွေအတွက် Factory reset ချစရာမလိုပဲ ...
Windows7 Backup လုပ်နည်းလေးပါ
password ကို recover ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင် Nuciear.Co...
ဖိုင်ကူးတဲ့နေရာမှာ အတော့ကိုမြန်တဲ့Fast Copy Software
USB မှ autorun.inf ကို ရှင်းလင်းမဲ့ Panda USB Vaccine
Registry ကိုပိတ်ခဲ့ရင် ဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်မယ်
Window အတတ်က Boot Logo ကို Disable ပေးနည်း
Gtalk မှာ username လေးမကျန်ခဲ့အောင်လုပ်ကြမယ်